Beesha Caalamka oo shir Online ah isugu keentay Kheyre iyo Dani – Bandhiga
Home Beesha Caalamka oo shir Online ah isugu keentay Kheyre iyo Dani
Beesha Caalamka oo shir Online ah isugu keentay Kheyre iyo Dani
in Beesha Caalamka oo shir Online ah isugu keentay Kheyre iyo Dani
Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda, mudane Xasan Cali Khayre ayaa guddoomiyay kulan looga hadlaay isku dubaridka u gurmashada Qardho oo ay ka qeyb galeen safiirrada dalalka saaxiibbada la ah Soomaaliya, hay’adaha gargaarka, QM iyo Masuuliyiin uu hoggaaminayo madaxweynaha Puntland.
Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa warbixin faahfaahsan ka bixiyay xaaladda taagan, iyo nuuca kaalmada degdegta ah ee hadda loo baahan yahay.
Mudane Xasan Cali Khayre oo ka hadlay muhiimmadda ay leedahay in xaaladahaan oo kale wadajir loo wajaho, ayaa ugu baaqay hey’adaha caalamiga ah iyo saaxiibada Soomaaliya inay u gurmadaan dadka reer Qardho si dib loogu soo celiyo noloshii caadiga ahaa.
Ra’iisul Wasaaraha oo beesha caalamka uga mahad celiyay taageerada joogtada aha ayaa sidoo kale dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada Puntiland ku amaanay sida midnimada iyo dhaqsaha leh ee ay ugu gurmadeen dadka ku nool qardho xilligii ay daadadku kusoo rogmadeen.
Safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya oo digniin adag ka soo saaray doorashooyinka Soomaaliya
Maxaa ku soo kordhay doorashada Soomaaliya? midowga musharaxiinta oo dalka ka maqan iyo wararkii ugu dambeeyy
Maxey kawada hadleen Qoor Qoor iyo James Swan oo ku saabsan doorashada?